Ny Fanjakan' Imerina na Fanjakana merina izay nanomboka tamin' ny taona 1787 ka nifarana tamin' ny taona 1897, dia fanjaka-mpanjaka nanapaka ny faritra afovoany sy ny faritra maro hafa teto Madagasikara nadritry ny taonjato faha-19. Antananarivo no renivohiny. Taty aoriana io fanjakana io dia nitondra ny anarana hoe Fanjakan'i Madagasikara ary ireo mpanjaka nitondra tao dia nitonon-tena ho "mpanjakan'i Madagasikara".
Ny Fanjakan'Imerina dia nipoitra tamin'ny andro nanjakan-dRalambo tamin'ny taonjato faha-16, eo amin'ny faritra avaratra atsinanan' Imerina ankehitriny. Ny mpanjaka voalohany araka ny lovantsofin'ny Ntaolo dia nanjaka tao Imerina tany amin'ny taonjato faha-12. Tamin'izany fotoana izany, ny faritra andrefan'Imerina, izay nitondra ny anarana hoe Imamo, dia fanjakana ihany koa, fa mbola lehibe noho Imerina. Afaka eninjato taona dia lasa tokana ny fanjakan'Imerina tamin' ny andro nanjakan' Andrianampoinimerina tamin'ny faran'ny taonjato faha-18. Tamin' ny andron' Andrianampoinimerina no nipoiran'ny atao hoe "fokontany". Nofoanan'ny Repoblika Frantsay ny Fanjakana Merina tamin'ny fandresen'ny Frantsay tamin'ny Ady Hova-Frantsay izay nifarana tamin'ny 1895, ary lasa zanatany frantsay i Madagasikara, ary i Gallieni no governora.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanjakan%27_Imerina&oldid=1036142"
Voaova farany tamin'ny 16 Aogositra 2021 amin'ny 14:58 ity pejy ity.